Vidim-panavotana any Madrid na Toledo
27 / 10 / 2015 Fampiofanana mpampiofana
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 27 / 10 / 2015
Manofana fiara madinika any Madrid
Fivarotana fitrandrahana 35 hividy: inona no tokony hatao ao an-tsaina
Vidim-panavotana any Madrid na Toledo. Ny fiasan'ny minibus dia safidy tsara indrindra ho an'ny tarika madinika, manome anao ny vidiny tsara indrindra. Antsoy izahay Telf 607372252 na mangataha fepetra eto
Ny fitaovam-pitrandrahana dia fitaovam-pitaterana mampifandray ny fampiononana sy ny vidiny. Nefa aloha Mipetraka ny seza 25 Maro ny toe-javatra izay manan-danja mba hahazoana traikefa amin'ny asa fanompoana mahafa-po. Raha manan-kery ianao rent minibus Ho an'ny fivoahana sasany, aza tapahina ny mamaky.
Fitrandrahana vidin-tsakafo - Inona no hodinihina alohan'ny hanaovana ny fifanarahana
Hire ny tranokala madinika 30 seza madrid sy toledo
Ny iray amin'ireo lafiny tsy voamarika indraindray ary zava-dehibe dia ny faharetan'ny dian-tongotra. Ny dia lavitra dia miteraka fahantrana bebe kokoa raha tsy manana mpandeha ny mpandeha, toy izany taloha Mividy seza iray minibus 24 Tsy maintsy ataonao ao an-tsaina ny faharetan'ny dian'izy ireo Maka ny seza madinika 22 Afaka manana safidy tsara ianao Rent bus Ao amin'ny 50 dia mipetrapetraka amin'ny seza 71 izay lehibe indrindra azontsika atolotra.
Raha fohy ny dia, dia tsy hisy olana Mipetraka ny seza 19 izay manana fahaiza-manao mitovy amin'ny isan'ny mpandeha, fa raha ora maromaro dia tsara kokoa izany Mividy seza iray minibus 14 miaraka amin'ny ambim-bidy, mba hahafahan'ireo mpandeha lavitra hanana toerana malalaka ary tsy ho tratran'ny reraka loatra.
Tsy maintsy ataonao koa fa ny fiampangana rehetra dia voatondro alohan'ny fanakatonana ny fifanarahana. Ny orinasa matotra iray dia hanazava mazava tsara ny fepetra farany, fa mividy seza 30 VIP minibus Amin'ny hafa izay tsy dia maro loatra no mety hitondra zava-tsy ampoizina tsy ampoizina.
Farany, ny vidiny sy ny fankaherezan'ny fiara izay hiseho amin'ny diany dia tokony horaisina ihany koa. Tranom-bary miisa 20 Ny fiheverana ireo singa rehetra ireo dia miantoka fa ny zavatra niainanao dia ny zavatra andrasanao.
Any Torres Bus dia manana izany rehetra izany izahay mba hanolotra anao ny serivisy fitaterana tsara indrindra amin'ny fiara madinika. Tranom-bary miisa 10 Miaraka amin'ny Bus Torres dia antoka izany, ary azo antoka izany amin'ny traikefa an-jatony amin'ny sehatra.
Mividy sehatra minibus 16 ao Madrid na Toledo vidéo
Vidim-panavotana any Madrid na Toledo Aogositra 30th, 2016Fampiofanana mpampiofana
Tagged: rent minibus, rent minibus madrid, Manaova minibus, Mipetraka ny seza 10, Mipetraka ny seza 14, Mipetraka ny seza 16, Mipetraka ny seza 19, Mipetraka ny seza 22, Mipetraka ny seza 24, Mipetraka ny seza 25, Mipetraka ny seza 30, Mipetraka ny seza 35, Vidim-panavotana any Madrid, Minisitry ny toeram-pivarotana ao Toledo, Vidim-bola hividianana minibus